तिथि मेरो पत्रु »6महिला पुरुष को प्रकार को लागि खोज रहे
द्वारा Mihaela Schwartz
6 महिला पुरुष को प्रकार को लागि खोज रहे
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: सेप्टेम्बर. 26 2020 |3मिनेट पढ्न
मानिसका लागि देख रहे महिलाहरु कस्तो? यो धेरै जवाफ एक प्रश्न छ. केही मान्छे सिद्ध शरीर र एक गायिका मनोवृत्ति संग सेक्स बम खोज्न, अरूलाई लागि एक चंचल महिला बढी आकर्षक छ, जबकि. केही मान्छे तिनीहरूलाई वास्ता गर्ने स्त्रीको आवश्यकता, बस गर्न प्रयोग आफ्नो आमा जस्तै. ती जो लागि रहस्य वा स्वतन्त्र ठिक्क भावना को एक बिट धेरै आकर्षक छ पनि छन्. नाटक बिना सबै सम्भाव्यता थकाइ छन्, यहाँ धेरै मानिसहरू खोज्दै हुनुहुन्छ महिलाको छ प्रकार छन्:
यो महिलाको प्रकार आजकल मानिसहरू आकर्षित सम्भावना बढी हो जो बाहिर आंकडा प्रयास गर्दा कुनै मन को कुरा आउँछ स्त्रीको पहिलो तरिका हो. यो साँचो हो: एक सेक्स बम बनाउन हुनेछ 99% त्यो सडक तल चल्छ जब मानिसहरू आफ्नो टाउको बारी. यो आकर्षण को धेरै व्यवस्थाको! तथापि, तपाईं ढुक्क सक्छ: यी मानिसहरू को लागि देख रहे मात्र महिला छैनन्! वास्तवमा, एक दीर्घकालिक सम्बन्ध खोज्दा, केही मान्छे पनि सेक्स बम जोगिन हुनेछ.
यस बचकाना महिला
तपाईं यो त धेरै पटक सुनेको: मानिसहरू पुरा हुर्केर कहिल्यै. तिनीहरू खेलौनाहरू र भिडियो गेम सबै आफ्नो जीवन खेल्न. यस तिमीलाई भेट्न हरेक एक मानिस साँचो होइन गर्दा, तपाईं बचकाना महिला आकर्षित महसुस गर्नेहरूको छन् थाह हुनुपर्छ, जीवन मा आफ्नो आशावादी दृष्टिकोण, आफ्नो चंचल मुस्कान कि कोठा lightens. ठूलो मान्छे अक्सर धेरै युवतीहरूसित आकर्षित छन् तिमी किन कहिल्यै सोच्नुभएको छ? यो एक कारण हुन सक्छ!
यो महिला आफ्नो पिता को संख्या लागि देख छन् भनेर छ, र आफ्नो आमाको प्रतिलिपि लागि पुरुष. किन? हुर्कंदै बेला मनोवैज्ञानिक विकास को पुरुषत्व / स्त्री को प्रोटोटाइप बारेमा हामी सबै तपाईं सबै बताउनेछ. यस अलावा, मानिसहरू वहाँ बाहिर भएका, जा misogynists बिना, आफ्नो आधारभूत आवश्यकता वास्ता गर्ने एक महिला आफ्नो जीवन साझेदारी जस्तै, खाना पकाउने र सफाई. साथै "गृहिणी" भनिन्छ, स्त्रीको आमा-जस्तै प्रकार धेरै पुरुष आदर्श छ.
सचेत हुनुहोस्: मानिसहरू पछि सधैं छन् आफ्नो सबै भन्दा स्त्री छ र कामुक पक्ष! आफ्नो मजाक बुझ्नुहुन्छ गर्ने एक असल pal बुझेकाहरूले छन्, खेल प्रशंसक रूपमा आफ्नो प्राथमिकता साझा, र एक गेम कन्सोलमा ह्यान्डल गर्न जान्नुहुन्छ. त्यस स्त्रीको ठाउँ भान्सा मा छ? जरूरी छैन! यी मान्छे को लागि, आदर्श महिला नै फुटबल टीम समर्थन, र आफ्नो मनपर्ने कार दौड भिडियो खेल मा एक राम्रो शत्रु हो. तथापि, कुरा बेडरूम मा परिवर्तन हुन सक्छ, तपाईं चिसो कार्य ड्रप र आफ्नो सबै भन्दा स्त्री को चाल बाहिर लिन हुन सक्छ जहाँ.
महिला रहस्य को एक आभा आफूलाई बस्नु मन, कम्तीमा सुरुमै. धेरै मानिसहरू यसको लागि गिर, तर रहस्य गएका एक पल्ट, बोरिंग हुन सक्छन् कुराहरू. त्यसैले, सावधान हुन! आफ्नो मान्छे पहिलो स्थानमा आफ्नो रहस्यमय पक्ष आकर्षित थियो भने, तपाईं यो सबै को केही साथ राख्न चाहनुहुन्छ सक्छ. एक महिला भएको आफ्नो सही व्यायाम, र अप्रत्याशित हुन प्रयास, तर केवल समय देखि समय. एक लामो कुल रहस्य आफ्नो मानिस तपाईं उहाँलाई केही लुकाइरहेका छन् सोच्न बनाउन सक्छ, र कुनै एक कि रुचि.
यो स्वतन्त्र स्त्रीको
पुरुष सामान्यतया सख्त पकडनेवाला भरपर्दा स्त्रीहरू जस्तै आफै एक कदम बनाउन सक्दैन नगर्ने. थुप्रै मान्छे बढी आवश्यक छ भने एक बल्ब आफु परिवर्तन गर्न सक्ने एक स्वतन्त्र स्त्रीको आकर्षित भएको महसुस गर्नेछन्. तथापि, आफ्नो स्वतन्त्रता कार्य ज्यादा होसियार नहुने, आफ्नो साथी लाग्न सक्छ रूपमा के तपाईंले आफ्नो जीवनमा उहाँको आवश्यकता छैन. तपाईं आफ्नो मा कि भारी झोला बोक्न व्यवस्थापन गर्न सक्छ भने पनि, तपाईं समय समयमा उहाँको मदत मागेर विचार हुन सक्छ.